पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खान चार बाख्राका मालिक, श्रीमतीभन्दा गरिब! « Dainik Online
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खान चार बाख्राका मालिक, श्रीमतीभन्दा गरिब!
प्रकाशित मिति : २ असार २०७९, बिहिबार ४ : ०१
दुई जोईका खसम पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफ र पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान आफ्ना श्रीमतीभन्दा गरिब भएको पाइएको छ।
निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको सम्पत्ति विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री शरीफ र उनका पूर्ववर्ती खानका पत्नीसँग आफ्ना पतिभन्दा अधिक सम्पत्ति रहेको पाइएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानसँग दुई लाख पाकिस्तानी रूपैयाँ पर्ने चारवटा बाख्रा छन्। अंशवण्डामा प्राप्त उनीसँग छ किसिमका सम्पत्ति छन्।
पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ पीटीआईका अध्यक्ष खानसँग न त गाडी छ न देश बाहिर सम्पत्ति नै। उनले कतै लगानी लगानी गरेका छैनन्।
खानसँग विदेशी मुद्रा खातामा तीन लाख २९ हजार एकसय ९६ अमेरिकी डलर, पाँचसय १८ स्टर्लिङ् पाउन्ड र छ करोड पाकिस्तानी रूपैयाँ छ। खानकी श्रीमती बुशरा बीबीको चार प्रकारका अचल सम्पत्तिसहित कुल सम्पत्ति १४ करोड २१ रूपैयाँको जायजेथा छ।
प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफकी जेठी जाया नुसरत शहबाजसँग पनि आफ्नो लोग्नेकोभन्दा धेरै सम्पत्ति छ। उनीसँग २३ करोड २९ लाखको सम्पत्तिसँगै लाहोर र हजारामा नौवटा कृषि सम्पत्ति र दुवै ठाउँमा एक–एक घर छन्। उनले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेकी दैनिक अखबार डनले छापेको छ।
प्रधानमन्त्री शरीफसँग १० करोड ४२ लाख रूपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ भने १४ करोड ७८ लाखको दायित्व छ। प्रधानमन्त्रीकी कान्छी जीवनसँगिनी तेहमिना दुर्रानीको सम्पत्ति केही वर्षदेखि करिब ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ।
दक्षिण कोरियामा कोरोनाका ९,५९५ नयाँ सङ्क्रमित फेला